Olee Mgbe Baịbụl Kwuru na Ụwa Ga-agabiga?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl kwuru na 1 Jọn 2:17, sị: “Ụwa na-agabiga, ọchịchọ ya na-agabigakwa.” Gịnị ka “ụwa” a a kpọrọ aha ebe a pụtara? Olee otú ọ ga-esi gabiga? Oleekwa mgbe ọ ga-agabiga?
Olee “ụwa” a na-ekwu na ọ ga-agabiga?
N’amaokwu ahụ, ụwa ahụ a kpọrọ aha nwere ‘ọchịchọ’ nke Chineke kpọrọ asị. N’ihi ya, o doro anya na ọ gaghị abụ ala nkịtị anyị na-azọ ụkwụ ka a na-ekwu okwu ya. Kama, ihe ọ pụtara bụ ụmụ mmadụ ndị merela onwe ha ndị iro Chineke n’ihi na ha anaghị erubere ya isi. (Jems 4:4) Ụmụ mmadụ ndị a “ga-anata ntaramahụhụ ikpe ọmụma nke bụ́ mbibi ebighị ebi.” (2 Ndị Tesalonaịka 1:7-9) Ma, ụmụ mmadụ ndị ‘na-abụghị nke ụwa’ n’ihi na ha na-erubere Jizọs isi, ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.—Jọn 15:19.
Baịbụl kwukwara na 1 Jọn 2:17, sị: “Onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.” Ihe Abụ Ọma 37:29 kwuru gosikwara na ọ bụ n’ụwa a ka ndị na-eme uche Chineke ga-ebi. Ọ sịrị: “Ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”
“Unu ahụla ụwa ma ọ bụ ihe ndị dị n’ụwa n’anya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụ ụwa n’anya, ịhụnanya maka Nna anyị adịghị n’ime ya.”—1 Jọn 2:15.
Olee otú a ga-esi bibie ụwa?
E nwere ụzọ ihe abụọ Chineke ga-eme. Nke mbụ, ọ ga-ebibi okpukpe ụgha niile. Na Baịbụl, e ji okpukpe ụgha niile e nwere n’ụwa tụnyere nwaanyị akwụna aha ya bụ “Babịlọn Ukwu ahụ.” (Mkpughe 17:1-5; 18:8) Okpukpe ndị a na-ekwu na ha na-ejere Chineke ozi, ma, ọ bụ ndị ọchịchị ka ha tụkwasịrị obi. Ndị ọchịchị a ga-emechakwa bibie ha. Baịbụl kwuru, sị: “[Ha] ga-akpọ nwaanyị akwụna ahụ asị, laakwa ya n’iyi ma mee ka ọ gbara ọtọ, ha ga-erikwa anụ ya [ya bụ, akụnụba ya] ma kpọọ ya ọkụ kpamkpam.”—Mkpughe 17:16.
Ihe nke abụọ Chineke ga-eme bụ ibibi ndị ọchịchị ahụ, ya bụ “ndị eze nke elu ụwa dum mmadụ bi,” na ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga-ebibi ha ‘n’agha nke oké ụbọchị nke Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.’ A na-akpọ agha ahụ agha “Amagedọn.”—Mkpughe 16:14, 16.
“Chọọnụ Jehova, unu niile ndị dị umeala n’obi bi n’ụwa . . . Chọọnụ ezi omume, chọọnụ ịdị umeala n’obi. Ma eleghị anya, a ga-ezobe unu n’ụbọchị iwe Jehova.”—Zefanaya 2:3.
Olee mgbe a ga-ebibi ụwa a?
Mgbe Chineke ga-ebibi ụwa a bụ mgbe ozi ọma Alaeze ya a na-ekwusa iji dọọ ụmụ mmadụ aka ná ntị juru ya afọ, ha anụ ya ma ghọta na ọ bụ ọchịchị ya ga-anọchi ọchịchị ụmụ mmadụ. (Daniel 7:13, 14) Jizọs Kraịst kwuru, sị: “A ga-ekwusakwa ozi ọma nke a nke alaeze n’elu ụwa dum mmadụ bi ka ọ bụrụ àmà nye mba niile, mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga-abịa.” (Matiu 24:14) Otu n’ime ihe ndị na-egosi na ọgwụgwụ ụwa eruwela nso bụ ozi ọma Alaeze ahụ a na-ekwusa. Ozi ọma a na-egosikwa na Chineke nwere obi ebere ma na-ekpe ikpe ziri ezi. Ihe ndị ọzọ a ga-eji mara na ọgwụgwụ ụwa adịla nso bụ agha, ala ọma jijiji, ụkọ nri, na ọrịa dị iche iche.—Matiu 24:3; Luk 21:10, 11.
Ihe ndị ahụ abụghị naanị ihe Baịbụl kwuru ga-egosi na ọgwụgwụ ụwa adịla nso. O kwukwara gbasara otú ndị mmadụ ga-esi na-akpa àgwà. Ọ sịrị: “A ga-enwe oge dị oké egwu, nke tara akpụ. N’ihi na ndị mmadụ ga-abụ ndị hụrụ naanị onwe ha n’anya, ndị hụrụ ego n’anya, . . . ndị na-enupụrụ ndị mụrụ ha isi, . . . ndị na-adịghị ejide onwe ha, ndị na-eme ihe ike, ndị na-adịghị ahụ ezi ihe n’anya, . . . ndị hụrụ ihe ụtọ n’anya kama ịbụ ndị hụrụ Chineke n’anya.” *—2 Timoti 3:1-5.
N’oge na-adịghị anya, ụwa ọjọọ a ‘ga-agabiga.’—1 Jọn 2:17
Ihe ndị a niile Baịbụl kwuru ndị ga-egosi na ọgwụgwụ ụwa adịla nso malitere imezu n’afọ 1914 mgbe a lụrụ Agha Ụwa Mbụ. Kemgbe ahụ, a na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke n’ebe dị iche iche n’ụwa. Obi dịkwa Ndịàmà Jehova ụtọ na e ji ikwusa ozi ọma a mara ha. Akwụkwọ ha kacha eji eme ya bụ Ụlọ Nche nke Na-ekwusa Alaeze Jehova.
“Na-echenụ nche, n’ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa ọ ga-abụ.”—Matiu 25:13.
^ para. 14 Ị chọọ ịgụkwu gbasara ihe e kwuru ebe a, gụọ isi nke itoolu n’akwụkwọ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. I nwekwara ike inweta ya na www.jw.org/ig.
Ihe Baịbụl kwuru banyere ọgwụgwụ ụwa nwere ike iju gị anya.
Amagedọn gbara naanị otu ugbo na Baịbụl. Ma, e kwuru gbasara agha a n’ebe niile na Baịbụl.
A Ga-azọpụta Ọtụtụ Ndị Mgbe Ọgwụgwụ Ụwa Ga-abịa—Gịnwa Nwekwara Ike Iso na Ha
Ma, olee ihe ị ga-eme ka a zọpụta gị? Ọ̀ bụ ịna-akwakọta ihe oriri na ihe ndị ọzọ maka ọgwụgwụ ụwa?
Ihe Baịbụl Kwuru Gbasara Ọgwụgwụ Ụwa